Ra’iisul Wasaare Kheyre oo maalinta berri hor-tagaya Baarlamaanka, si codka kalsoonida loogu qaado – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo maalinta berri hor-tagaya Baarlamaanka, si codka kalsoonida loogu qaado
Ra’iisul Wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa lagu wadaa inuu maalinta berri oo taariikhda tahay 1-da March hor-tago Baarlamaanka, si codka kalsoonida loogu qaado.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in kalfadhiga koowaad ee Baarlamaanka Federaalka oo maalinta berri furmaya codka kalsoonida loogu qaadi doono Ra’iisul Wasaaraha cusub.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa shalay shaaciyay in maalinta Arbacada ee berri uu furmi doono kalfadhiga 1aad ee Baarlamaanka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu si rasmi ah u furo kalfadhiga 1aad ee Golaha shacabka, waxaa Madaxweynuhu ka codsan doonaa Xildhibaanada inay codka kalsoonida siiyaan.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa kulamo la lahaa Xildhibaanada Baarlamaanka ee beelaha, isagoo weydiisanayay inay codka kalsoonida siiyaan.
Ilo ku dhow dhow Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa sheegaya inay u badan tahay in Ra’iisul Wasaaraha uu helo codka kalsoonida Baarlamaanka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa la filayaa in marka uu la ansixiyo uu soo dhiso Xukuumad cusub, waxaana la sheegayaa inuu Ra’iisul Wasaaruhu hada wado wada tashiyadii uu ku soo dhisi lahaa Golihiisa Wasiirada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa todobaadkii hore si lama filaan ah u magacaabay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo ku tilmaamay inuu yahay nin ay wada shaqeyn karaan, kuna soo xushay kartidiisa, aqoontiisa iyo inuu yahay nin ammaanada ku fiican
Qarax gaari oo goor dhow ka dhacay Magaalada Muqdisho
C/weli Gaas oo ka hadlay toddobada wiil ee dilka lagu xukumay iyo Nabadoonka lagu xiray Boosaaso